Xaashi iyo Guuleed oo ka hor yimid amar ka soo baxay FEIT | KEYDMEDIA ONLINE
16 January 2022 Maxaa keenay in ay hoos u dhacaan Howl-galladii Danab?
Waxa ay xuseen in Maamulka farsamo ee Doorashada uu leeyahay Guddiga hirgelinta Doorashada heer Somaliland (SEIT).
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaare ku xigeynka dalka Mahdi Maxamed Guuleed iyo Guddoomiyihii hore ee Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullahi, oo gar-wadeyn ka ahaa doorashadii karaasta Aqalka Sare ay ku leeyihiin gobollada Waqooyi, ayaa qaadacay, amar Axaddii ka soo baxay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka ee (FEIT).
Qodobka 4-aad ee waraaqda ka soo baxday FEIT, ayaa lagu sheegay in meesha laga saray habraac ay hore u sameeyeen Xaashi iyo Guuleed, waxaana Guddiga Doorashada Soomaaliland la faray in ay ku shaqeeyaan habraaca Golaha Wadatashiga Qaran.
Hayeeshee, Guddoonka Sare ee Doorashada Somaliland, ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay luuqadda uu ku qornaa qodobka 4-aad ee War-saxaafadeedkii ka soo baxay 5 December 2021, Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka ee (FEIT).
Waxa ay xuseen in marka dib loogu laabto dhammaan Habraacyadii doorashooyinka Dadban ee 2012, 2016, heshiisyadii iyo habraacyadii Madasha doorashooyinka Qaran ee 2020/2021, ay waajib tahay in siyaasiyiinta waqooyi loo madax banneeyo doorashada kuraasta.
“Doorashada Xildhibaannada ka soojeeda Gobolada Waqooyi (Somaliland) waxaa lagu maamulaa duruuf gaar ah, waxayna lahaan jirtay, hadana leedahay Hoggaan Siyaasadeed oo masuul ka ah hagista doorashada uguna jira halka Madaxweyneyaasha Dawlad Goboleedyada iyo Dawladoodu ugu jirtaan Doorashooyinka ka dhacaya goobaha kale dalka”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay [GSDS].
Waxa ay sheegeen in hirgalinta doorashada u madax bannan yihiin, isla-markaasna iyagu maamuli doonaan iyagoo ka ilaalinaya faro-galin shaqsiyaad kale, kana tala-galinaa Ra’iisl Wasaare Rooble.
“Sidaanu wax badan ku celcelinay, Doorashada Xildhibaanada Gobolladda Waqooyi (Somaliland) waa doorasho ay u madax banana yihiin in ay maamushaan dadka iska leh, oo aan marna la aqbalayn in ay faraha la soo galaan cid ama shaqsiyaad kale, waxaana hagisteeda ka wada tashanaya Guddoonka Sare Doorashada Somaliland iyo Ra'iisul Wasaaraha Dalka’. Ayaa lagu yiri.
Waxa ay sidoo kale xuseen in Maamulka farsamo ee doorashada uu leeyahay Guddiga Hirgelinta Doorashada heer Somaliland (SEIT).
Maxaa keenay in ay hoos u dhacaan Howl-galladii Danab?
Warar 16 January 2022 13:26
Sababo jira awgood, Waxaa hoos u dhac weyn uu ku yimid waqtigan, howl-galladii ciidamada danab ee ka dhanka ahaa Kooxda Al Shabaab.
Puntland oo cagaha galineysa colaad hor leh
Warar 16 January 2022 10:21
Qoondada siyaasadda haweenka oo walaac laga muujinayo
Warar 16 January 2022 6:08